स्टार अफ दि इयरको अर्थ के ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsस्टार अफ दि इयरको अर्थ के ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अवार्ड कलाको मुल्यांकन गर्नका लागि कि वितरण गर्नका लागि । अवार्ड कलाकारलाई मुल्यांकन गर्नका लागि कि खुशी पार्नका लागि । अवार्ड कलाकारलाई उपस्थित गराउनका लागि कि उनीहरुको कामको मुल्यांकन गर्नका लागि ? यो बहस विश्वभर नै चलेको छ । तर, अझै पनि अवार्ड विवादरहित र मापदण्डमा रहेर हुन सकेको छैन ।
अवार्डको मापदण्ड नहुँदा विभिन्न विधा सिर्जित गरेर वितरण गरिने अवार्डको अर्थ के हो ? अहिले त कलाकारलाई अवार्ड पुर्याउनका लागि विभिन्न विधा थपिन्छ । यसैले पनि अहिले अवार्डमा थपिएका विधाको अर्थ खोज्न थालिएको छ ।
अहिले वितरण हुने एउटा अवार्ड हो, स्टार अफ दि इयर । स्टार अफ दि इयरको अर्थ हुन्छ, बर्षभरको सबैभन्दा पपुलर कलाकार । जसलाई दर्शक र मिडियाले हरेक कोणबाट स्टार भन्न सकुन् । उसको सिनेमाले हलमा राम्रो व्यापार गरेको हुनुपर्यो, दर्शक उसकै नाममा हलमा आएको हुनुपर्यो । उसको खबरले संचारमाध्यममा स्थान पाएको हुनुपर्यो । दर्शकले उसलाई सर्वाधिक प्रेम गरेको हुनुपर्यो ।
तर, नेपालमा स्टार अफ दि इयरको मापदण्ड नै छैन । कुरा गरौ, कामना फिल्म अवार्डको । यो अवार्डमा अवार्ड वितरण गर्नुभन्दा १ मिनेट अघि आएकी थिइन् प्रियंका कार्की । उनलाई स्टार अफ दि इयरको अवार्ड दिइयो । तर, गएको बर्ष प्रियंका कार्की स्टारको रुपमा सबैभन्दा अघि थिइन् होला त ?
सिनेमामा प्रियंकाको क्रेज गुम्दो छ । उनको नाममा नै सिनेमा चल्न छाडेको धेरै भैसक्यो । उनी आफै हलमा दर्शक तान्न सक्ने खुबी राख्दिनन् । यसैले पनि प्रियंकालाई आजको दिनमा बर्षकै स्टार भन्ने कि नभन्ने तर्क पेस गर्न सकिएला ?
आयोजकले भोटिङको आधारमा स्टार अफ दि इयर छानेको बताएको छ ।
गतबर्ष हेर्ने हो भने प्रियंका भन्दा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, स्वस्तिमा खड्का, अनमोल केसी, प्रदिप खड्का धेरे अघि छन् । यसैले पनि प्रियंका स्टार त हुन् तर स्टार अफ दि इयर कसरी भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ । नेपालमा आयोजना हुने बर्षका दर्जन अवार्डमा यो विधा राख्न थालिएको छ ।
यो सजिलो किन हो भने, यसमा अवार्ड दिएपछि उत्कृष्ट अभिनेत्रीको विधामा अर्की अभिनेत्रीलाई अवार्ड दिन सजिलो हुन्छ । यसैले स्टार अफ दि इयरको मापदण्डलाई हल्काफुल्का बनाउन थालिएको छ । बर्षभर आयोजना हुने दर्जन बढी अवार्डमा हरेक अवार्डमा फरक फरक स्टार जन्मिन्छन् । यसैले पनि स्टार अफ दि इयर हुनका लागि के के चाहिने हो भन्ने नै छैन ?
विधा थप गर्नुको अर्थ अवार्ड बाडिचुडी गर्न सजिलो होस् भनेर होइन । यसले त कलाकारलाई अवार्ड लिदा गर्व महशुश हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यसको कुनै सिमारेखा नै छैन । आयोजकको मनपरी अनुसार विधा थप्यो अवार्ड बाड्यो ।
नेपालमा अवार्डको गरिमा यसकारण पनि कमजोर हुन थालेको हो ।